man'ee(wwaan) filatamoof seera gitaa'insa ifteessi.
Fakkeenyaaf,ulaagaalee kan akka:"Lakkoofsota 1 fi 10 giddu" ykn "Barrruuwwaan arfiilee 20 olii hin qabne" hiiku dandessa.
man'ee(wwaan) filatamoof dirqaqla gitaa'insa cuqaasi.
Ulaagaaleen armaan gadii ni jiru
Lakkoofsota hundaa qofatu ulaagaan walgita.
Lakkoofsootni hundi uulaagaan wal gitu.
Lakkoofsotni hundi ulaagaa sana guutu.Gatiwwaan galan kunis kan isaan dhangaa'aan akkaataa qaaqni itti aanun dhufu waamamunidha.
Gatiwwaan hangii man'ee keessati qofa kennaman eeyyama.Hangii man'ee tokko tokkoon ifteessuun,ykn hangii deetaa teessoon maqeessuu,ykn hangiin maqeessuu.Hangiin kunis tari tarjaa ykn tarree man'eewwaani tokkoo of keessaa qabachuu danda'a.Yoo dhangii tarjaawwani ykn tarreewwaani ifteessitee,tarjaa duraa qoofa fayyadamna.
Gatiiwwaan ykn diraawwan tarree keessatti eeraman qofa hayyami.Lakkoofsota gatii isaanii madaalun,kanaafuu yoo lakkoofsa 1 tarree keessa galchite,galfanni 100% gitaa'a dha.
Galfata dheerinni isaa ulaagaa kennamee gute.
Man'eewwaan duwwaa hayyami
Wal qabsiisuu Meeshaalee-Argama-Deetaa fashaala'ee mallatteessi, kunis man'eeewwaan duwwaan akkaa deetaa fashalaaweetti(dhaamsameetti) ykn (dandeessifamee)miti.
Tarree filannoo agarsiisi
Galti oliin tartiiba qabsiisi
Tarree filannoo oliin tartiiba qabsiisi akkasumas tarree keessa gingiilchuun baay'isi.Yoo hin mirkaannoofne,tartiiba madda deetaa fudhana.
Man'ee hangii gatii gita'aa ykn barruu qabate galchi.
Gatinsaa gatii gita'aa ykn diraa barruu qabate galchi.
SanduuqaHeyyami keessaa isa filatte gati gata'insaa deetaa dirqalaaf galchi.
Dirqaala gitaa'insaa deeta sanduuqa Heyyamii keessatti filatteef gatii gad'aantoo galchi.
Dirqaala gitaa'insaa deeta sanduuqa Heyyami keessatti filatteef gatii ol'aantoo galchi.
Title is: Ulaagaalee